MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2012-12-16
at 12/22/2012 07:17:00 PM No comments:
at 12/22/2012 07:06:00 PM No comments:
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်စခန်း တနေရာ (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
ပင်လယ်ရေပြင်အထက် ပေ ၅ ထောင်ကျော်မြင့်တဲ့ တောင်စောင်းတခုပေါ် ဖြစ်သလို တည်ဆောက်ထားတဲ့ ယာယီတဲငယ်အတွင်းမှာ ထင်းမီးဖို အရှိန်နဲ့ နွေးထွေးနေပါတယ်။ ထင်းမီးဖို ဘေးမှာတော့ ပခုံးပေါ်မှာ အပွင့် သုံးပွင့်ပါ စစ်ယူနီဖောင်း ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူငယ်တဦးက သူ့ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ဘ၀နဲ့ ဖြစ်ချင်မြင်ချင်နေတဲ့ ဘ၀ကို ပြောပြဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၉ နှစ် နီးပါးက အခုလို ရာသီ၊ အခုလိုကာလမျိုးမှာ အင်မုဏ်ဂါဏ်ဆိုတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်တဦးကို ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင် တောတွင်းစခန်းတခုမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အဲဒီလူငယ်လေးဟာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) မှာ ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်ရော၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ရဲ့ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးဌာနမှာ အရာရှိတဦးအဖြစ်ပါ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေပါတယ်။
at 12/22/2012 07:03:00 PM No comments:
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်သည် KIA ဌာနချုပ်ကို ထိုးစစ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်၏ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတွင် ပေါ်တာဖမ်းနေကြောင်း သိရှိရသည်။ ကချင်ဒေသခံအနေများသော ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် ပေါ်တာလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှေ့တန်းတွင် ပေါ်တာများသည် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ၊ လက်နက်ကြီးကျည်များကို ထမ်းပေးရကာ စစ်ကြောင်း၏ လူဒိုင်းများအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ မြန်မာအစိုးရက အတင်းအဓ္ဓမလုပ်အားခေါ်ယူမှု မပြုပါကြောင်း ILO အား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း တိုင်းရင်းသားဒေသတွင် အတင်းအဓ္ဓမခိုင်းစေမှုများ၊ တပ်ခြံကာပေးခြင်း၊ သစ် ၀ါး ခုတ်ပေးခြင်း၊ တပ်စခန်းတွင် နွားလှည်း၊ သုံးဘီးများ ချောအဖြစ် နေ့စဉ်အလှည့်ကျတာဝန်ယူပေးရခြင်း ပေါ်တာလိုက်ပေးရခြင်း….စသည် စသည်တို့သည် တိုင်းရင်းသားများ ယနေ့တိုင်ရင်ဆိုင်နေရသော နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းပင် ဖြစ်နေရသေးသည်။
at 12/22/2012 06:55:00 PM No comments:
ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် မိုးမောက်မြို့နယ်၊ စိန်လုံကဘာဒေသ တိန်ရောင်တောင် (Ting Rawng Bum) တွင်အခြေပြုထားသော အမှတ်(၃၇၀) အမြောက်တပ်ရင်းမှ တပ်သား အေးချမ်း သည် KIA တပ်ဖွဲ့သို့ အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ တပ်သား အေးချမ်း ၏အရာရှိ ဗိုလ်ကြီးဟိန်းမင်းဟန် ၏ ရက်စက်ညှင်းပမ်းမှု၊ အနိုင်ထက်ကျင့်မှုကို မခံရပ်နိုင် တော့သဖြင့် အထက်အရာရှိ ဗိုလ်ကြီးကို ဓါးဖြင့်ခုတ်ပြီး တပ်စခန်းမှထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာအစိုးရရှေ့တန်းစခန်းတိုင်းတွင် အရာရှိအဆင့်ဆင့်က လက်အောက်ငယ်သားများကို အနိုင်ကျင့်၊ ဆဲဆို၊ ရိုက်နှက်၊ ကျွန်သဖွယ်ခိုင်းစေခြင်း၊ နှမအမိထိ ဆဲဆိုပြောဆိုခြင်း များကြောင့် အကြပ်၊ တပ်သားများသည် စိတ်ပင်ပန်းကာ ထွက်ပြေးမှုများ၊ အထက်အရာရှိများကို လုပ်ကြံပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေသည်။
at 12/22/2012 06:54:00 PM No comments:
at 12/21/2012 08:52:00 PM 1 comment:
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် မြန်မာ အစိုးရတပ်များ အကြား စစ်ရေး တင်းမာနေစဉ် လာမည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်း၌ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အစိုးရဘက်က ကမ်းလှမ်းထားပြီး ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ဘက်မှ အကြာင်းမပြန်နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရအနေနှင့် နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ သွားရောက်နိုင်မည့် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ သို့မဟုတ် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် အဆိုပြုထားပြီး ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ခေါင်းဆောင်များထံ ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့က စာပေးပို့ထား ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဦးစန်းအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
at 12/21/2012 06:07:00 PM 1 comment:
မန္တလေး - မြစ်ကြီးနားသွား ကုန်တင်ရထားဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း က မိုးညှင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာ မိုင်းထိလို့ ရထားမောင်းသမား အပါအ၀င် ၃ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိသွားပါတယ်။
မနက် အရုဏ်မတက်ခင် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာ မိုးညှင်းမြို့နယ် နမ္မား ဘူတာနဲ့ ၂ မိုင်အကွာမှာ မိုင်းခွဲ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဒေသခံ တစ်ဦးက DVB ကို ပြောပါတယ်။
“နမ္မားကြီး ကျေးရွာနားမှာ မိုင်းကွဲတဲ့ အသံအရင်ကြားတယ်၊ နောက် သေနတ်ပစ်သံ ကြားတယ်။ မိုင်းကွဲပြီးမှ ပစ်ကြတာ ဖြစ်မယ်၊ ညဘက် ဆိုတော့ နှစ်ဖက်ပစ်သလား တစ်ဖက်ကပဲ ပစ်သလား သေချာ မသိလိုက်ဘူး။ ရထား တချို့မှောက်တယ်။ လောလောဆယ် အတည်ပြု မရသေးတဲ့ သတင်းတွေအရ လူ ၃ ယောက် ဒဏ်ရာရလို့ မိုးညှင်း ဆေးရုံ ပို့လိုက်ရတယ် ပြောတယ်။”
at 12/21/2012 06:06:00 PM No comments:
at 12/21/2012 11:51:00 AM No comments:
ဒီဇင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်အချိန်တွင် ရွှေညောင်ပင် တပ် စခန်းမှတဆင့် ဂျာပူ(Ja Pu)သို့ ချီတက်လာသော အင်အား(၃၅၀)ခန့် ပါဝင်သော စစ်ယာဉ်(၃၇)စီး မြေထိုးစက် ဘူဒိုဇာ(၂)စီးပါ စစ်ကြောင်းကို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့များ ထိခိုက်မှုများကာ မြေထိုးစက်တစ်စီး ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းစစ်ကြောင်း သည် ဂန်ဒေါ်ယန်သို့ ဆက်လက်ချီတက်ကာ KIO ဗဟိုဌာနချုပ် ကို မြောက်ဖက်မှထိုးစစ်ဆင် ရန် စီမံချက်နှင့် ချီတက်လာ သော တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။
at 12/21/2012 11:42:00 AM No comments:
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ကေအိုင်အို နှစ်ဖက်စလုံး အနေနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံဆွေး နွေးကြဖို့ အမေရိကန် အစိုးရက ဒီကနေ့ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန် တိုက် တွန်းလိုက်ပါတယ်။
at 12/20/2012 11:34:00 PM No comments:
ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံ ကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုများ လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ အတွင်းက ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ အပြီး ယခုလဆန်းပိုင်းမှစ၍ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် KIA အဖွဲ့တို့အကြား နှစ်ဘက် တိုက်ပွဲများ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ။
မေး - လက်ပန်တောင်းတောင်ကိစ္စ အပြီးမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေ တို့ တိုက်ပွဲတွေပိုဖြစ်လာတာပေါ့နော် ဘာကြောင့် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာ သလဲဆိုတာ အရင်ပြောပေးပါ။
ဖြေ - လက်ပန်တောင်းတောင်ကိစ္စ အပြီး တိုက်ပွဲတွေပိုများလာတာ ဆိုတဲ့ကိစ္စက အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်း ရွေလီ ဆွေး နွေးပွဲ အပြီးမှာ အစိုးရဘက်က Target ပြောင်းသွားတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ မူလက အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေး မလုပ်ခင် မြင်နေရတာက ချွေစစ်သဘောမျိုး အမြဲ မပြတ်ထိတွေ့ပြီး ချုံ့ထားတဲ့ အနေအထား နေရာအနှံ့ သေနတ်သံမြည် နေအောင် လုပ်ထားတာပေါ့။
at 12/20/2012 11:33:00 PM No comments:
at 12/20/2012 11:26:00 PM No comments:
at 12/20/2012 09:01:00 PM No comments:
ဒီဇင်ဘာလ(၁၄)ရက်က KIA တပ်ရင်း(၃)တပ်ဖွဲ့မှ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူလိုက်သော လောပွန်(Law Pun) စစ်စခန်းတ၀ိုက် ခမရ(၄၁၆)တပ်ဖွဲ့မှ မြုပ်နှံထားသော နှင်းမိုင်း(၂၇)ကို KIA တပ်ဖွဲ့က ရှာဖွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ(၁၉)ရက် မနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မှ စစ်ကြောင်းချီတက်လာသော မြန်မာအစိုးရ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် KIA တပ်ရင်း(၁၉)တို့ ပန်စွန်(Pan Tsun Post)အနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒေါ့ဖုန်းယန် အခြေစိုက် အမှတ်(၃၆၇) အမြောက်တပ်ရင်းမှ ၁၀၅ မမ၊ ၁၂၀ မမ အမြောက်ဖြင့် ပစ်ကူပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
at 12/20/2012 07:42:00 PM No comments:
အသက် ၇ နှစ်နဲ့ ၈ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားငယ်တွေ အဲသလို ဆေးရုံတင်လိုက်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရမ်းကျေးရွားမှာနေထိုင်သူ တစ်ဦးက RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။
at 12/20/2012 07:41:00 PM No comments:
at 12/20/2012 07:40:00 PM No comments:
ယမန်နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နံနက်ပိုင်း ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင်အခြေစိုက် သည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တပ်ရင်း ၃ နှင့်မြန်မာအစိုးရ တပ်များ တိုက်ပွဲနှစ်နေရာဖြစ်ပွားရာတွင် အစိုးရဖက်မှ တပ်သား ၁၂ ဦးကျော် သေဆုံးပြီး အတော်များများ ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း ဒေသခံများ ပြောသည်။
KIA ဖက်မှလည်း ၁ ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း KIA တပ်ရင်း ၃ သတင်း ရပ်ကွက်မှပြောသည်။
at 12/19/2012 08:50:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang ginra rai nga ai Gara Yang hte Sam Pai lapran, Du Kaba Nban Laanga nawng makau kaw lu sha wa sa nna bai nhtang yu wa ai myen tai hpyen hpung marai (50) daram hpe, KIA myu tsaw share ninghkring ni kawn dai ni daw hta remove bawm hte (6) lang hkap kapaw bun lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn myu tsaw share ninghkring ni bawm hte hkap gasat ai hta myen hpyen la ni (10) jan kapawayai si ma sai lam hpe mung na chye lu ai.
at 12/19/2012 08:33:00 PM No comments:
at 12/19/2012 08:23:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်လ် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ မနေ့က မနက်ပိုင်းမှာ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းတွေနဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့က HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို စောင့်ရှောက်ကုသပေးနေတဲ့ ဌာနတစ်ခုကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ကချင်ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ သွားရောက်လေ့လာစဉ်
at 12/19/2012 08:14:00 PM No comments:
ထိုးစစ်မဆင်ပါဘူး... ရိပ်ခါပို့တဲ့ တပ်တွေကို ကေအိုင်အေက တိုက်နေပါ တယ် လို့ ပြောနေတဲ့ အချိန်အတွင်း တလကို တိုက်ပွဲပေါင်း ရာနဲ့ချီ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လိုင်ဇာ အနီး ၀န်းကျင် (၅)မိုင် အကွာမှာ ရှေ့တန်း စခန်းမရှိတဲ့ နေရာအထိ တပ်မ နဲ့ ရိပ်ခါလာပို့ တယ် ဆိုတာ.... ဘာရိပ်ခါ အမျိုးအစားလည်းဆိုတာ ၀ူးတိန်းရှိန် အသိဆုံးနေမှာပါ။
at 12/19/2012 05:13:00 PM No comments:
at 12/19/2012 04:19:00 PM No comments:
at 12/19/2012 04:14:00 PM No comments:
at 12/18/2012 09:53:00 PM No comments:
at 12/18/2012 09:48:00 PM No comments:
at 12/18/2012 09:46:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် ကေ အိုင် အေ တပ်ရင်း (၃) ဒေသ ကန်ပိုင်တီ သွားလမ်း၊ အရင် ကေအိုင်အေ တပ်စခန်းဖြစ်ပြီး ဗမာစစ်အစိုးရ စစ်တပ်မှ သိမ်းပိုက်ယူထားသော ဘွမ် တောင်စခန်းတွင် ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့ မနက် (၆း၅၀) နာရီခန့်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 12/18/2012 02:58:00 PM No comments:
at 12/18/2012 02:51:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ Derek Mitchell
at 12/18/2012 02:46:00 PM No comments: